﻿Download Iphekhi Yokusebenzisana Kolimi i-Windows 7 from Official Microsoft Download Center
e-DariIsi-AlbaniaIsi-Amharic saseIsi-ArmenianIsi-AssameseIsi-Azeri (EsiyisiLatini)IsiBasqueIsiBengali (isiNdiya)IsiBengali (saseBangladesh)IsiBhunu IsiBosnia (esiyisiCyrillic)	IsiBosnia (EsiyisiLatini)IsiCatalaIsiFilipinoisiGaliciaIsiGeorgiaIsiGujaratiIsiHausaIsiHindiIsi-IcelandIsi-IgboIsi-IndonesiaIsi-Inuktitut (EsiyisiLatini)IsiKannadaIsiKazakhIsiKhmerIsiKonkaniIsiKyrgyzIsiLuxembourgIsiMacedonia (saseMakhedoniya endala)IsiMalay (saseBrunei Darussalam)IsiMalay (saseMalesia)IsiMalayalamisiMaltaIsiMāoriIsiMarathiIsiNepalIsiNgisiIsiNorway (esiyisiNynrsk)Isi-OriyaIsiPediIsiPersiaIsiPunjabiIsiQuechua (sasePeru)IsiRashiyaIsiSerbia (esiyisiCyril)IsiSinhalaIsiSwahiliIsiTamilIsiTatarIsiTeluguIsiTswana (saseNingizimu Afrika)isi-UrduIsi-Uzbek (EsiyisiLatini)IsiVietnamIsiWelshIsiXhosaIsiYorubhaIsiZuluNgokwe-IrishTurkmen (Latin) - Turkmenistan
Khetha ukulanda okufunayo
Usuku Ekhishwe Ngalo:
Ipheki Yokusebenzisana Yolimi ye-Windows (LIP) inikeza inguqulo ehunyushwe ingxenye yezindawo ezisebenziswa jikelele ze-Windows. Emva kokufaka i-LIP, izihloko zombhalo kuwizadi, amabhokisi omyalezo, amamenyu, Nosizo Nokusekela zizoboniswa kulimi lwe-LIP. Umbhalo ongahunyushiwe uzoba kulimi oluyisisekelo lwe-Windows 7. Ngokwesibonelo, uma uthenge inguqulo Yesipenishi ye-Windows 7, futhi ufake i-Catalan LIP, eminye imibhalo izosala Ngesipenishi. Ungafaka i-LIP edlula eyodwa kulimi lwesisekelo olulodwa. Ama-LIP e-Windows angafakwa kuzo zonke izinguqulo ze-Windows 7.
Ama-Operating System Asekelwe:
• I-Microsoft Windows 7
• Nokufakwa kolimi lwesisekelo oludingekile le-Windows 7: Isingisi
• Isikhala esikhululekile sokulanda i-4.63 Mb
• Isikhala esikhululekile sokumisa i-15Mb
ISEXWAYISO: Uma unombhalo wemfihlo we-BitLocker ovuliwe, sicela uwukhiphe ngaphambi kokufaka i-LIP. Vula i-Control Panel, khetha i-System and Security, bese i-BitLocker Drive Encryption. Qhafaza okuthi i-Suspend Protection.
Ngoba zingukulanda okwehlukile zenguqulo ye-Windows 7 LIP ye-32-bit ne-64-bit, ngaphambi kokuba uqale, kumelwe uthole ukuthi yiziphi izinguqulo ze-Windows 7 ozifakile. Nansi indlela yokuthola ukuthi iyiphi inguqulo ye-Windows 7 oyifakile:
Qhafaza inkinobho i-Start bese uqhafaza ngokwesokudla Kukhompyutha bese ukhetha i-Properties. Lokhu kuzoletha ukwaziswa okuyisisekelo ngekhompyutha yakho.
Bheka kungxenye Yesistimu ukubona uhlobo Lwesistimu. Lokhu kuzobonisa uma i-Windows 7 Isistimu Esebenzayo Yisistimu Esebenzayo ye-32-bit noma Isistimu Esebenzayo ye-64-bit.
Ukuze ufake inguqulo ye-32-bit, yenza lokhu:
Qhafaza inkinobho yeLanda, bese uqhafaza Open ukufaka LIP
Qhafaza inkinobho yeLanda
Qhafaza ku Save ukukopisha ifayela kwikhompyutha yakho,
Zulazulela kufayela elandiwe bese uqhafaza kabili kuyo ukufaka LIP
Ukuze ufake inguqulo ye-64-bit, kufanele usebenzise inketho yesi 2 engenhla.
Uhlelo Lolimi Lwendawo lwe-Microsoft
Amafayela Alandwayo Athandwa Kakhulu
Imikhiqizo Yandawonye Wonke Business Solutions Office Servers Windows Phone Developer Tools MSN Windows Windows Live Games & Xbox Windows Mobile Internet Explorer Other
Ilayisha imiphumela yakho, sicela ulinde...
Vula iZibuyekezo ze-Microsoft
I-Office 365 yezikole
Thola umhlinzeki wesixazululo
IsiZulu (i-South Africa)